Fifanakalozan-kevitra mandritra ny seminera misy fomba dimy samy hafa hamoahana manontolo ny tranonkala ho an'ny fampiasana tsy ofisialy
Indraindray mila mijery Internet. Noho izany dia tsy maintsy mamerina manangana ny rakitra, fa ny ankamaroan'ny tolotra fampiantranoana dia tsy manome izany safidy izany. Azontsika atao ny manahaka ny rafitry ny tranonkala malaza, ary koa ny mijery ny endriky ny CSS na HTML - кинг конг прохождение. Na inona na inona toe-javatra mety hitranga, dia misy fomba maro samihafa entina entina an-tserasera ny tranonkala iray manontolo. Ampiasao amin'ny iray amin'ireo fitaovana voatanisa etsy ambany ianao, afaka matoky anao amin'ny tranokala manontolo na ny isa maromaro takiana. Isaky ny mitaky fahazoan-dàlana izy ireo dia afaka misafidy ny dikan-teny maimaim-poana ary tsy handoa na inona na inona ho an'ny drafitra avo lenta. Ireo fitaovana ireo dia tena mety tsara ho an'ny fandraharahana sy ny orinasa maoderina.
HTTrack dia programa malaza na rindrambaiko mba hakana tranonkala iray manontolo. Ny interface-interface sy ny maoderiny maoderina dia manatsara ny asan'ny mpampiasa. Ilainao fotsiny ny mampiditra ny URL amin'ilay tranonkala tianao halaina sy haka azy io ho an'ny fidirana an-tserasera.
Azonao atao ny maka ny tranokala iray manontolo na manasongadina pejy maromaro mba ahafahan'izy ireo miditra ao amin'ny fiara sarotra anao. Tsy maintsy ampahafantarinao koa hoe firy ny connexion mifanaraka aminao te-hisokatra amin'ny download. Raha tratra ela loatra ny rakitra iray, dia azo atao ny manala ny dingana avy hatrany.
2. Ny findleft
Ny findleft dia programa vaovao sy maoderina maro be miaraka amin'ny endri-javatra maro ary ny interface-friendly interface. Vantany vao nalefa sy navotsotra, dia mila milina "Ctrl + U" ianao mba hanombohana. Mampidira URL ary tehirizo ireo torohay. Alohan'ny hanombohan'ilay fampiharana, Getleft dia hanontany anao ny habetsaharanao izay tianao halefa ary raha misy ny lahatsoratra sy ny sary. Raha vantany vao vita ny famoahana dia afaka mijery ny tranonkala manontolo ihany koa izahay.
Ireo endri-javatra PageNest dia mitovy amin'ny an'ireo Getleft sy HTTrack. Tsy maintsy miditra amin'ny adiresy ao amin'ny tranokala ianao ary alaina ao anaty fiara sarotra. Ireo mpampiasa dia nangataka ny zavatra tena ilaina toy ny anaran'ny tranonkala iray ary ny tokony hamonjena azy. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny safidinao ary manitsy ny sehatrao.
Miaraka amin'ny Cyotek WebCopy, mila mampiasa ireo tenimiafina efa voafaritra ianao ho an'ny fanamarinana. Azonao atao ihany koa ny mamorona ny fitsipika miaraka amin'ity fandaharana farany ity ary mahazo ny tranonkala iray manontolo mivoaka avy hatrany amin'ny fampiasana ivelan'ny aterineto. Ny haben'ny tranokalan'ny tranokala sy ny isa feno dia aseho amin'ny sehatra havanana amin'ny biraonao.
Wikipedia dia tsy manoro antsika hampiasa fitaovana tsotra tahaka ny Import. io sy Kimono Labs mba hahazoana ny angon-drakitra nalefa ho an'ny fampiasana ivelan'ny aterineto. Raha ny tokony ho izy, dia manoro hevitra hatrany ny Wikipedia Dumps satria ity programa ity dia manome vokatra tsara. Azonao atao ny maka ny tranonkala iray manontolo amin'ny endrika XML, manaisotra ireo angona izay mahasoa ny tranokalanao na ny orinasa an-tserasera.